रोचक खबर – rastriyakhabar.com
काठमाडौं । धेरै मानिसहरू जहाजमा उडानको सपना देख्छन् । मान्छेहरु आफ्नो पहिलो यात्रालाई यादगार बनाउनको लागि, विभिन्न कामहरू गरिरहेका हुन्छन् । तर कल्पना गर्नुहोस् कि यदि कुनै व्यक्ति विमानको ल्यान्डिङ गियरमा बसेर यात्रा गर्छ भने के हुन्छ ? यस्तै एउटा घटना अमेरिकाबाट बाहिर आएको छ । त्यहाँका एक..
काठमाडौं । हामी सदैव कुनै कुराबाट कसरी छुटकारा पाउने भनेर सोचिरहेका हुन्छौँ । तपाईं कुनै पनि कुराबाट जबर्जस्ती छुटकारा पाउन सक्नुहुन्न । यदि तपाईंले कुनै कुरालाई जबर्जस्ती त्याग्न खोज्नुभयो भने, त्यो अर्को रूपमा प्रस्तुत हुनेछ अनि तपाईंभित्र अर्को किसिमको विकार उत्पन्न हुनेछ । यदि त्यसलाई..
एजेन्सी । एक मलेसियन गाइनोकोलोजिस्ट कम्पनीले संसारकै पहिलो पुरुष र महिला दुबैले प्रयोग गर्न मिल्ने कण्डम बनाएको छ । यो कन्डम मेडिकल ग्रेड मटेरियलको प्रयोग गरेर बनाइएको बताइएको छ । यसलाई चोटपटक हुँदा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । वण्डालिफ नाम दिइएको यस कण्डमले प्रजनन स्वास्थ्यका लागि तथा जन्मदर..
काठमाडौं । विश्वमा धेरै आश्चर्यचकित कुराहरुमा रेर्कड बन्ने गरेका छन् । यो बीचमा अहिले बाहिर आएको एक विश्व कीर्तिमानले सबैलाई हैरान बनाएको छ । टर्कीमा बस्ने एक ७१ वर्षीय पुरुषले संसारको सबैभन्दा ठूलो नाक भएको कीर्तिमान कायम गरेका हुन् । ७१ वर्षीय मेहमेट ओजुरेकले विश्वको सबैभन्दा ठूलो नाक भएको विश्व..
एजेन्सी । मानिसको शरीर अन्य प्राणीको तुलनामा निकै संवेदनशील हुन्छ । यही कारण भविष्यमा हुने घटनाप्रति हाम्रो शरीरले पहिले नै आशंका गरिरहेको हुन्छ । शरीरको विभिन्न अंग फर्फराउनुले भविष्यमा हुने घटनाबारे जानकारी दिन्छ ।समुन्द्र शास्त्र अन्तर्गत कुन अंग फर्फराउँदा भविष्यमा कस्ता घटना हुन सक्छन्..
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकामा विद्यालय गएकी आफ्नी छोरीको कपाल बिनाअनुमति काटिदिएको भन्दै एक व्यक्तिले १० लाख डलर क्षतिपूर्ति दाबी गरेका छन्। उनले विद्यालय सञ्चालन गर्ने स्थानीय प्रशासन र दुई कर्मचारीलाई मुद्दा हालेका छन्। जिमी होफ्मेयरले मिश्रित वर्णकी आफ्नी छोरीको संवैधानिक अधिकार..
काठमाडौं । बिहीबार अर्थात् २४ भदौमा हरितालिका तिज मनाइँदैछ । त्यसको अघिल्लो दिन बुधबार दरखाने प्रचलन नारीहरूमा छ । अघिल्लो वर्ष कोभिड(१९ कै कारण जमघटसहित तिज मनाउन पाइएन, यो पटक पनि कोभिड १९ कै जोखिम छ । यद्यपि, तिजमा ब्रत बस्ने, एकाघर परिवारमा रमाइलो गर्दा समस्य नहुने जनस्वास्थ्यविद्हरूले बताएका..
हिक्मत डंगोल । अहिले समाज छिटो–छिटो परिवर्तन भैरहेकोले सबैतीर तनाब छ । पारिवारिक तनाव, अत्याधिक थकान, दुःख, शोक, बिछोडको पीडा, आकर्षक, व्यापारिक तनाव, अनुचित योन सम्बन्ध, शारिरिक बिरामी, सम्भोग पूर्व स्खलन र यौनिक असन्तुस्तीका कारण मन सधैँ आशांकित र भ्रमित हुने गर्दछ । तपाईको पत्नी शयनकक्षमा मौन..
कोस्टा रिकामा चमेराको आनीबानी अध्ययन गरेका वैज्ञानिकहरूले चमेराका बच्चा र मानवका शिशुले गर्ने प्रलापमा विचित्रको समानता भएको पत्ता लगाएका छन्। चमेराहरूले लय मिलेको ध्वनि निकाल्छन् तथा “मूलभूत अक्षर ” पुनरावृत्ति गर्छन्। अनि यसबाट चमेराको प्रलापले मानवजातिका शिशुमा जस्तै सञ्चारको जग बनाएको..
एजेन्सी । मानिसहरु अन्तरिक्षमा जाने कुरा त तपाईंले सुन्नुभएको छ । तर के तपाईंले अन्तरिक्षमा सेक्स खेलौना पठाउने बारे कतै सुन्नुभएको छ ? हजुर हो, एसियाली मुलुक जापानको एक फर्मले हालै यस्तो फैसला गरेको छ । एक जापानी वयस्क फर्मले सेक्स खेलौनाले अन्तरिक्ष उडानको बेला शुन्य गुरुत्वाकर्षमा कस्तो काम गर्छ..
काठमाडौं । हरेक देशको सेनामा केहि सैनिकहरू हुन्छन्, जसको साहस, हिम्मत, बलिदान, पराक्रम र शक्तिबारे हामी प्रायः सुन्छौं वा पढ्छौँ । हरेक देशको सेनामा त्यस्ता केही सैनिकहरू हुन्छन् । अर्कोतर्फ, कमाण्डोको नाम सुनदा पनि हामी एक त्यस्तो व्यक्तिको क्लपना गर्न थाल्छौ, जुन समान्य मानिसहरु भन्दा फरक हुन्छ..
एजेन्सी । यौन खेलौनाको नाम लिने बित्तिकै मानिसहरु लजाउने गर्दछन् । कुनै अर्कै संसारका बारेमा कुरा हुँदैछ जसरी मानिसको फरक व्यवहार हुने गर्दछन् । यौन सुख दिने यी खेलौना अर्थात सेक्स टोइज हाम्रा पूर्खाले हजारौं वर्षदेखि नै प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । संसारकै सबैभन्दा पहिलो कृतिम लिङ्ग २८ हजार वर्ष..
समुन्द्रमा झिँगे माछा सङ्कलन गर्ने काम गर्दै आएका माइकल प्याकर्डले आफूलाई कसरी ह्वेलले निलेपछि फेरि बच्न सफल भए भन्ने पत्रकारहरूलाई बताएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाको म्यासाचुसेट्सको प्रोभिन्सटाउन शहर नजिकै समुन्द्रमा गोता लगाइरहेका बेला विशाल जीव ह्वेलको मुखभित्र करिब ३०- ४० सेकेन्ड परेको..
काठमाडौ । नेपालमा श्रीमान, श्रीमती नहुँदाका साथी किन्न पाइन्छ । राजधानी काठमाडौमा त गल्ली गल्ली र चोक चोकमा किन्न पाइन्छ । काठमाडौका मुख्य स्थलमा रहेका केही होडिङ बोर्ड र भित्र राखिएका पसलका सामानले त पक्कैपनि के यो प्रश्न नगर्ला ? यो रूढिवादी समाजमा सांस्कृतिक विचलन की क्रा’न्ति ? हो यही प्रश्नले..
मंगल ग्रहमा पृथ्वीकै जस्तो माटो, ढुंगा र पानी
काठमाडौ । अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाको पर्सिभिरेन्स अन्तरिक्ष यानले रातो ग्रहको उपनामले चिनिने मंगल ग्रहमा सय दिन बिताएका छ । यो अवधिमा उक्त यानले मंगल ग्रहमा विगतमा जीवको अस्तित्व थियो कि थिएन भनेर अध्ययन गरेको छ। साथै त्यहाँको जलवायु र भू–विज्ञानको अध्ययनका लागि पनि तथ्यांक संकलन गरिरहेको..